के थारूलाई औलो लागेको थिएन ? – Tharuwan.com
प्रकाशित : २०७७ पुष २९ गते १३:०९
चितवनमा अमेरिकाको सहयोगमा निकै पहिले राप्तीदून परियोजना थियो । वि.सं. २०१३ सालमा चलेको सो परियोजनाले चितवनमा औलो नियन्त्रण गर्ने र बस्ती बसाउने काम गरेको थियो । पहिला चितवनको मैदानी क्षेत्रमा थारू समुदायको बसोबास थियो । राप्तीदून परियोजनापछि नै पहाडबाट पनि बसाइँ सरेर आउने क्रम ह्वात्तै बढेको हो । ‘अमेरिकाको सुरुवातको प्रोजेक्टमध्ये सबैभन्दा ठूलो यही राप्तीदून थियो,’ टमले भने । अमेरिकाले चलाएको त्यो परियोजनाको प्रभाव के थियो भनेर गाउँमै गएर बुझौं भन्ने उद्देश्यले आएपछि आफू थारू समुदायसँग जोडिएको उनले बताए । थारू समुदायका बारेमा शोध गरेका अर्का व्यक्ति अर्जुन गुनरत्नेको सल्लाहमा आफू बछौली झरेको उनले बताए । गुनरत्ने अमेरिकामा बस्ने श्रीलंकाका अनुसन्धानकर्ता हुन् । चितवन आएपछि टमलाई लाग्यो, अमेरिकासँग निकै पहिल्यै थारूहरू जोडिएका रहेछन् ।